Shan Qodob Oo Ku Saabsan Bruno Miguel Borges Fernandes Oo Dhawaan Uun Ku Soo Biiray Kooxda Man United? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Xili ciyaareedkiisii ugu horreeyey ee Novara ee Serie B, waxa xiddiga reer Portugal dareenkooda siinayay kooxo waaweyn oo ay ka mid yihiin Juventus iyo Inter Milan oo muujiyey inay doonayaan, waxaana lagu naanaysi jiray Maradona of Novara, ereyadaasna waxa adeegsaday warbaahinta qaarkeed. Kaddib waxa uu go’aansaday inuu ku biiro Udinese oo uu xiddigaheeda ka mid ahaa ruug-caddaaga caanka ah ee Antonio Di Natale.
Waxa uu Di Natale la yaabay tayada ciyaareed ee ku jirta iyo xirfaddiisa, waxaanu daqiiqad kasta ka caawin jiray sidii uu ula qabsan lahaa kubadda Talyaaniga ee uu usii kordhin lahaa xirfaddiisa ciyaareed, waxaanu siin jiray talooyin iyo waanooyin, iyadoo uu u tilmaami jiray waxyaabaha qarkood oo uu samayntooda ku dedaalo. Di Natale waxa uu sannadihii ay wada joogeen uu ka caawiyey inuu helo kalsooni ka badan ciyaartoyda kale, taas oo ah midda xilligan ka dhigtay libaaxa Old Trafford.
Sawirrada ay ciyaartoydu jidhkooda ku sameeyaan waxay iska noqdeen wax caadi ah muddooyinka dambe, waxaana samaysay ciyaartooyo badan sida Lionel Messi, hase yeeshee Cristiano Ronaldo ayaa ku jira ciyaartoyda jidhkooda ka ilaaliyey waxyaabaha noocaas ah.
Bruno Fernandes waxa ku sawiran jihdkiisa lambarka 8 iyo xarafka ‘F’. Ereyga F waxa uu u taagan yahay xarafka uu ka bilaabmo magaca qoyskoodu ee Fernandes, lambarkuna waxa uu ka turjumayaa arrimo muhiim ka ah noloshiisa, taas oo aanay cid waliba ogeyn.
Xiddiga reer Portugal waxa uu dhashay 8-dii September, 1994-kii. Waxa uu Sporting Lisbon u xidhan jiray No. 8, guulo badanna wuu gaadhay intii uu lambarkaas xidhnaa. Aabihii oo ciyaartoy ahaan jiray ayaa sidoo kale xidhan jiray No. 8, waana tiro muhiim u ah isaga iyo qoyskiisa oo aabbihiina uu aad u jeclaa.
Markii uu Fernandes ku biiray Sporting Lisbon xagaagii 2017, waxa la filayey inuu isku muujin doono, sababtoo ah waxa daliil u ahaa guulihii uu kasoo gaadhay Talyaaniga. Si kastaba, laacibka reer Portugal waxa uu ku bilaabay bandhig cajiib ah, isagoo afar gool dhaliyey shantiisii ciyaarood ee ugu horreeyey.
Xili ciyaareedkiisii ugu horreeyey waxa uu dhaliyey 16 gool iyo 12 gool oo uu caawiyey 56 kulan oo uu saftay, waxaana dhamaadkii xili ciyaareedka amaba July 2018 loo magacaabay xiddiga horyaalka Portugal ee Primera Liga.
Xili ciyaareedkiisii labaad, waxa uu dheelay 53 ciyaarood, waxaanu dhaliyey 32 gool iyo 18 caawimood, waxaanay taasi layaab ku noqotay xattaa weeraryahannadii oo gaadhi kari waayay gool-dhalintiisa, waxaana mar kale loo magacaabay xiddiga sannadka.